OsoteMapi | OsoteMapi ™ Infographics
Na NextMapping™ anyị kwenyere na nyocha - anyị kwenyere n'ịnye nyocha n'ụzọ dị mfe.
Ihe omuma anyi bu ‘dashboards’ n’abia n’iru okwu banyere oru.
Ọdịnihu dị ebe a - na -eduga n'ebe ọrụ ngwakọ
Anyị nọ na 'ugbu a' nke ụwa ọrụ ọhụrụ - isi ihe bụ maka ndị isi na ndị otu ịhụ mgbanwe mgbanwe a ka ohere.
A na -agbatị anyị niile ka anyị nwekwuo ndidi, ọmịiko na nghọta anyị n'ebe ibe anyị nọ n'ebe ọrụ ngwakọ.
Ebe ọrụ ngwakọ nọ ebe a ka ọ nọrọ. Gị na ndị isi gị adịla njikere ime nke ọma na eziokwu ọhụrụ a?
How Leaders Can UpSkill and ReSkill Ndị Ọrụ Na-ezute Nzube Azụma Ọhụrụ nke Ọdịnihu
Enwere mkpa ngwa ngwa maka ndị mmadụ n'otu n'otu, ndị isi na ndị ọrụ ịchọpụta oghere nka na ịhazi atụmatụ maka 'ihe na -esote' n'ịrụpụta nka dị mkpa iji gafee ihe na -esote.
A na-enye usoro isii a maka ịzighachi reskilling na upskilling na infographic a.
Ndị ọrụ nwere nkà dị mkpa iji nwee ihe ịga nke ọma na 'Next' Nkịtị nke Ọrụ
Site na mmụba nke ọrụ dịpụrụ adịpụ na ụdị ngwakọ n'ọdịnihu nke ịrụ ọrụ (n'ime ime / ụlọ ọrụ) anyị niile kwesịrị ịbawanyewanye ikike 'mmadụ'.
Ihe omuma ihe omuma a na-enye ihe omuma na ihe omuma nke ndi oru choro iji nwee ihe iga nke oma.
Ọhụrụ & 'Na-esote' Usoro nke Ọrụ
Ndụ ọrịa na-efe efe na-arụ ọrụ na ọrụ ga-adị ka ihe dị iche iche. Ị dịla njikere?
Ihe omuma ihe omuma a na-enye onu ogugu na ihe ndi ozo iji nwekwuo ikike gi na-aga n'ihu na 'oru' ozo nke oru.
Kedu otu ị ga-esi mee ka arụpụtaghị ihe ka arụ ọrụ
Otu n'ime nsogbu kachasị ndị mmadụ na - arụ ọrụ na - arụ bụ na - aga - esi na - arụpụta ọrụ.
Anyị na-enye 8 Atụmatụ otu esi ejide n'aka na ị ga - enwe ike ịrụ ọrụ gị kachasị mma kwa ụbọchị.
Ihe omuma a na - enye otutu onu ogugu ma ihe eji enyere gi aka ime ka oru gi ghara idi ezigbo.
NextMapping™ Ormalrụ Ọrụ Ọhụrụ
Ọrịa Coronavirus ahụ egosila na ọrụ agaghị abụ otu.
Omenala ebe ọrụ n'ebe izu ole na ole gara aga egosila na ụlọ ọrụ ndị nwere ike ime nke ọma na ndị ọrụ ime obodo. Mgbapụ ọrịa na-efe efe ọ gaghị abụ 'azụmaahịa dịka ọ na-adị' ọ ga-abụ 'ọhụụ nkịtị nke azụmahịa'.
Nke a putara na ndi ndu kwesiri iju aka, nwee obi mmasi ma nwee obi igbanwe uzo ndi di ugbua ilebara ndi mmadu anya.
Ozi a na - enye ọnụ ọgụgụ na “NextMapping™ Nrụ Ọrụ Ọhụrụ. ”
Innovation: Atụmatụ Dị Mkpa Maka 2020 & Na-agafe
94% nke ndị isi nyochara kwuru na ihe ọhụrụ bụ usoro dị mkpa maka 2020 na karịa.
Ihe omuma mejuputara okike di icho ma choro ma ndi mmadu ma ndi omenala.
Na infographic ọhụrụ a na-achọpụta ROI nke imepụta ihe na ụfọdụ ụlọ ọrụ 'na-emeri' na mmeputa.
Ihe kpatara vidiyo bu 'aghaghi ime ihe' maka odinihu oru
Gị na ụlọ ọrụ gị na-egwu vidiyo ị na-ewe ma na-ejigide ikike gị kachasị elu?
Nchọpụta egosila na 67% nke ndị na-ekiri igwe na Millennials na Gen Z na-eji vidiyo na-achọ ihe ndị ọzọ gbasara ndị were n'ọrụ.
Findchọta ihe ndi ozo banyere ihe mere vidiyo bu ihe aghaghi ime maka odinma oru n’iru ibudata ndi ohuru a site na otu anyi na NextMapping.
Isi nke 1-8 Infographics site na akwụkwọ ọhụrụ, NextMapping ™ - Ntughari uche, Chọgharịa na Mepụta Ọdịnihu nke Ọrụ
Na-eweghachi Millennials na Gen Z's na Ọrụ Ọrụ Jikere Ọdịnihu
Asọmpi nke onyinye ga na-aga n'ihu na-abawanye ebe ndị mmadụ nwere ọtụtụ nhọrọ maka ọrụ karịa ka ọ dị ugbu a.
Companieslọ ọrụ na ndị ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eso mba ụwa niile eme ihe iji na-adọta ma na-edebe ndị nwere nkà. Addgbakwunye na ihe ịma aka ndị ọzọ Millennials na Gen Z na-ahọrọ ịghọ onye ọchụnta ego.
Kedu ka ị ga - esi nọrọ na njedebe nke iweghachite Millennials na Jen Z?
Lelee infographic a na onu ogugu enwere ugbua ya na ighota ihe banyere oru banyere odinihu oru.
Ndị ọrụ were Dijital Dijitalụ & AI
O yiri ka ihe ka ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na-achọsi ike inweta mgbanwe dijitalụ na AI - lelee Infographic iji mụtakwuo.
Ndị isi ochichi 8 na-eduga amszọ Ndị Ọsọ
Ka ọ na-erule 2030, 50% nke ndị otu ga - arụ ọrụ - ma ụlọ ọrụ gị ugbu a nwere ndị dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ na ndị isi agaghị enwe usoro akọwapụtara nke ọma iji tinye ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ.
Ndị ọrụ anya na-achọrọ abamuru nke ịrụ ọrụ n'ime obodo NA ha chọrọ ka etinye ha dị ka ndị otu egwuregwu dị mkpa.
Ndi ndu ndi mmadu nke 8 choro igbanye ubochi oru
Ọdịnihu nke ọrụ abụghị echiche, ọ dị adị ma bụrụ mkpebi na omume anyị taa.
Nchọpụta teknụzụ dị mkpa iji mee ka ndị mmadụ nweta ngwọta na anyị niile kwesịrị ịdị na-eji ọgbara ọhụrụ eme ihe iji kee ọdịnihu. Agbanyeghị, naanị teknụzụ agaghị ekepụta ọdịnihu anyị kachasị mma, ọ bụ ndị mmadụ na ndị mmadụ lekwasịrị anya nke mbụ ga-agbanwe ọdịnihu kpamkpam.
Lelee ihe omuma a banyere ikike mmadu nke 8 nke ndi isi choro ighaghari oru oru ha.
Ngbanwe nke 10 nke Onye ndu obula choro ime ka odi njikere
Everchetụla etu ụfọdụ ndị siri nwee ike nweta echiche ma gbuo ya ngwa ngwa?
Ọ bụ n'ihi na onye ahụ amalitela ọkwa dị elu nke 'mgbanwe ndu' - ikike imeghari, mụta ma mee ihe ngwa ngwa.
Lelee infographic a na mgbanwe ndị isi kwesịrị ime ka ọ bụghị naanị ịdị njikere n’ọdịnihu kamakwa iji nwee ike ‘ịmepụta ọdịnihu’ ọsọ ọsọ.
Onye isi ochichi ndu 10 nke 2018
Otutu ndu ndu ndi mmadu nke mere ka anyi ruo ebe anyi no taa aghaghi ime ka anyi bia ebe anyi kwesiri idi oru oru ndu a.
Ihe omuma a a na-enye ndi-isi ochichi ndi ochichi nke 2018.
Ihe ịga nke ọma nke 13 nke Nhazi Ọha Dị Ọdịnihu
Companieslọ ọrụ ndị nwere ụfọdụ ihe dị na ya ma ọ bụ atụmatụ iduzi nọ n'isi mmalite nke nzukọ ndị dị njikere n'ọdịnihu.
Ọdịnihu nke Ọrụ
Budata anyi 'N'ile anya' Future nke Work infographic nke ahụ na-enye data kachasị ọhụrụ banyere ọdịnihu nke ọrụ ga-adị ka ọ na-enye gị isi maka otu ị ga - esi mepụta atụmatụ gị na ịbịaru nso dịka onye ndu na ụlọ ọrụ gị.
Idu Ndú: Onye ọ bụla Bụ Onye Ndú
Budata anyi 'na a anya' Nduzi Leadership infographic na-enye ndị ọhụrụ data na ihe idu ndu echiche ga-adị ka ọrụ ọdịnihu.
Ingzụlite Ndị Isi Ọdịnihu Anyị
You maara na kwa ụbọchị maka afọ 19 nke 10,000 Baby Boomers ga-eru 65 afọ ma ugbua taa Millennials mejuputara 50% nke ndị ọrụ ụwa?
Ọzụzụ Ndu Ọhụụ chọrọ iji mezuo atụmanya nke Millennial na Gen Z's. Budata Infographic a nke nwere ozi bara uru nke ga - enyere gị aka ịghọta mkpa ha ka ị nwee ike ịhazi nke ọma maka mmepe ha!
Ọdịnihu nke Organizationtù Ọrụ
Ọdịnihu nke Ọrụ dị ugbu a na Ọha ga-abụrịrị ndị lekwasịrị anya n’ọdịnihu ka ihe gaziere gi. Budata infographic a ka ichoputa ebe nlebara anya gi di… Oge gara aga ma obu odinihu!
Ihe ngbanwe nke 5 nke otutu Nlele
Ọdịdị dị mkpa nke ịrụ ọrụ n'ọdịnihu bụ ikike ịhụ n'akụkụ niile. Nke a pụtara ịhụ ọnọdụ site na oghere nke onwe / ndị ọzọ / ụlọ ọrụ / ndị ahịa / ụwa - ihe ọmụma a na-enye nghọta banyere otu esi ewulite echiche dị iche iche maka ọdịnihu nke ọrụ.
Companieslọ ọrụ na-akpali akpali nke 5 nwere ndị ndu Ọchịchị
Budata ụbọchị ọrụ nke infographic ọrụ a nke na-ekerịta atụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ 5 dị iche iche na otu ndị isi si eme ihe dị iche iche nke ịdị njikere ugbu a na ihe anyị nwere ike ịmụta site na ụzọ ha.
Debanye ugbu a iji budata akwụkwọ ahụaja
Ọ bụrụ Robots bụ Ọdịnihu nke Ọrụ - Kedu Ihe Na - esote Ya Na Hummụ Mmadụ?